Facts About Pets – Page3– Petunity
အမွေးကျွတ်တယ်ဆိုတာ ကြောင်တွေရဲ့ သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ အပြင်မှာနေတဲ့ ကြောင်တွေက နွေဦး နဲ့ ဆောင်းဦးတွေမှာ အမွေးပိုကျွတ်ပြီး ဆောင်းတွင်းမှာတော့ သိပ်ကျွတ်လေ့မရှိပါဘူး။ အိမ်တွင်းမှာပဲနေတဲ့ ကြောင်တွေကတော့ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အမွေးကျွတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင့်ရဲ့ကြောင်မှာ အမွေးကျွတ်တာများပြီး အကွက်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်၊ သိသိသာသာ အမွေးတွေအရမ်းကျွတ်နေပြီဆိုရင်တော့ တိရစ္ဆာနိဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ကြောင်တွေ အလွန်အကျွံ အမွေးကျွတ်တာလဲ? 🙀ဆေးဝါးဆိုင်ရာ၊ အစားအသောက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကြောင့် ကြောင်တွေမှာ...
ခွေးလေးတွေမှာ အမွှေးအလွန်အကျွံကျွတ်ခြင်း 🐕🐩🐺🦊
ခွေးတွေမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် အမွေးဟောင်းတွေ၊ ပျက်စီးနေတဲ့ အမွေးတွေ ကျွတ်လေ့ရှိပါတယ်။ အမွေးကျွတ်တာဟာ သာမန်ဖြစ်စဉ် တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမွေးကျွတ်တဲ့ နှုန်းနဲ့ ပမာဏက ခွေးတွေရဲ့ အမျိုးအစားနဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ခွေးတွေဟာ ဆောင်းရာသီမှာ အမွေးထူတတ်ပြီး နွေရာသီမှာ အမွေးကျွတ်လေ့ရှိပါတယ်။ အိမ်ထဲမှာပဲ နေတဲ့ ခွေးတွေဟာတစ်နှစ်ပတ်လုံး မျှတစွာအမွေးကျွတ်လေ့ရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ခွေးလေး အရေပြားမှာ အနီကွက်တွေ၊...
ကြောင်ပေါက်လေးတွေဟာ ဖျားနာမှုနဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကို ခံနိုင်ရည်အားနည်းကြပါတယ်။ ကြောင်ပေါက်လေးတွေရဲ့ ခံနိုင်ရည်အားဟာ သူတို့ကို အိမ်ထဲမှာပဲ အခြားတိရိစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့အတူ မွေးမြူခဲ့တာလား? သူတို့ကို အပြင်ထွက်ကစားခွင့် ပေးခဲ့လားဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ကာကွယ်ခြင်းဟာ ကုသခြင်းထက် ကောင်းပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးတွေဟာ သင့်ရဲ့ ကြောင်လေးကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ သာမာန်ဖျားနာမှုတွေကအစ ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါတွေကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တချို့ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေဟာ ကူးစက်နိုင်ပြီးတော့ တချို့ဆို...
ကြောင်ကလေးတွေကို မွေးတဲ့အခါ ရောင်းချတဲ့ တိရစ္ဆာန်ပေါက်စလေးတွေကို မွေးတာပဲလို့ အများက ထင်ကြတယ်။ မွေးတဲ့ နေရာက သာမန်နေရာပဲ ဖြစ်နေပါစေ၊ ကြောင်ကလေးက အရမ်းငယ်လွန်းနေရင် အိမ်အသစ်၊ နေရာအသစ်မှာ မွေးတာကလည်း သူ့အတွက် အန္တရာယ်များလွန်းလှပါတယ်။ ကြောင်မေမေကြီးနဲ့ မကြာသေးခင်ကပဲ ခွဲလာတာဆိုရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ အဟာရဓာတ်တွေ ချို့တဲ့သွားနိုင်တာပေါ့။ 😓ကြောင်ကလေးများနှင့် အသက်အရွယ် 🐈ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ကြောင်မေမေကြီးတွေက သူတို့ရဲ့ ကြောင်ကလေးတွေကို...
အိမ်ကခွေးလေးတွေကို ဂရုစိုက်ပါဦးနော် 😥 Credit: AT LEAST 12 dogsaday face being put to sleep because owners fail to update their microchip details.
ကြောင်လေးတွေဟာ လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ မိသားစုလိုမြင်တတ်ကြပါတယ်။ ကြောင်လေးတွေသူတို့လက်ဖ၀ါးလေးနဲ့ နှိပ်ပေးတာကြုံဖူကြပါသလား? အဲ့လိုလုပ်တာဟာ ကြောင်ပေါက်လေးတွေ အစာတောင်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကြောင်လေးက သင့်ကိုအဲလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကိုသူ့အမေလို့မြင်နေလို့ပါပဲ။ ❤️😍 Petunity
ကျွန်ုပ်မှာ ဌက်တစ်ကောင်ရှိသည် သူသည် ကျေးကျုတ်တစ်ကောင်ဖြစ်သည် 😁 #Petunity Credit: Abnormal Molting inaParakeet and photos form internet.